असारमा साढे सात अर्बको रकमान्तर ! « मेचीखबर
असारमा साढे सात अर्बको रकमान्तर !
७ श्रावण २०७२, बिहीबार ०७:२८ मेचीखबर
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७१र७२ को अन्तिममा साढे सात अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । भैपरी आउने साधारण र विकास बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको हो ।
एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम अर्को कार्यक्रममा सार्नु बजेट रकमान्तर हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम असारमा सात अर्ब ५२ करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
अघिल्लो आव ०७०र७१ मा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको बजेट रकमान्तर भएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा यसरी नै ठूलो रकम रकमान्तर हुने गरेको छ । सुरुका महिनामा रकम खर्च नगर्ने, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । बजेट सक्न हतारमा गरेको कामसमेत गुणस्तरहीन हुँदै आएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले सुरुमै रकम मागे पनि बजेट बढी खर्च गरेको देखाउन अर्थ मन्त्रालयले आवको अन्तिममा मात्र रकम निकासा दिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको बजेटबाट विकास आयोजनाका लागि भन्दा पनि साधारण खर्चका लागि बढी रकमान्तर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा छाप्न तथा सुझाब संकलन गर्न, गाडी किन्न रकमान्तर गरिएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन–भत्ता वितरण, कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, प्रहरीलाई तलब–भत्ता खुवाउन पनि रकमान्तर गरिएको छ । यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रम, बेपत्ता छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण आयोगलगायतका लागि पनि रकमान्तर गरिएको छ ।
गत वर्षभन्दा बढी रकमान्तर
गत वर्ष पनि अन्तिम महिनामा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको थियो । साढे तीन अर्ब रकमान्तर गरेर बजेट छरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तर, यसपालि त्योभन्दा दोब्बर रकमान्तर भएको छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा रकम खर्च नगर्ने, तर अन्त्यमा बजेट सक्न रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । बजेट सक्न हतारमा गरेको कामसमेत गुणस्तरहीन हुँदै आएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले सुरुमै रकम मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले आवको अन्तिममा मात्र रकम निकासा दिने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।